Beesha Caalamka oo war ka soo saaray khilaafka ka taagan Galmudug | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Beesha Caalamka oo war ka soo saaray khilaafka ka taagan Galmudug
Beesha Caalamka oo war ka soo saaray khilaafka ka taagan Galmudug
QM, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa kulligood muranka iyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Galmudug C/Kariim Xuseen Guuleed iyo xubnaha baarlamaanka Galmudug walaac ka muujiyay.
Si kastaba ha ahaatee afhayeenka baarlamaanka Galmudug ayaa codkaa la qaaday ama mooshinka asna diiday kuna tilmaamay xaq darro. C/Kariim Xuseen Guuleed ayaa isna xaq darro mooshinkaa ku tilmaamay kuna soo rogay Galmudug 3 bilood oo ah xaalad dagdag ah.
Beesha caalamka gaar ahaan QM, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ugu baaqaya darafyada is haya in khilaafka laga gaaro wax-walba oo khilaafka keenay.
Previous articleFaallo: Maxay ka dhigan tahay guusha Cabdiwali Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad
Next articleGuddiga Gurmadka Abaaraha oo Deeq lacageed ka guddoomay musharrax Farmaajo